Hadiyadaha Maalinta Aabbaha 2022: daryeelka shakhsi ahaaneed, dharka iyo waxyaabo kale oo badan! | Ragga Stylish
Maalinta Aabbaha waxay ku siinaysaa fursad aad ku aqoonsato shaqada aabbahaa ama lataliyahaaga. Hadiyaduhuna waxay noqon karaan muuqaalka dareenkaas qaddarinta iyo mahadcelinta leh.
Haddii aad ubaahantahay xoogaa dhiirigelin ah, kuwa soo socdaa waa fikradaha kaa caawinaya inaad hesho hadiyadda maalinta aabbaha ee qumman:
1 Daryeel shaqsiyeed
2 Dharka, dhammaystirka iyo kaabayaasha
3 Buugaag, filimaan iyo muusig
Baxter ee Kaalifoorniya
Daryeelka timaha wajiga waa howl aan laga fursan karin. Iyo aragtidaas, Maqaallada la xiriira qaybtan jirka ah had iyo jeer waa wax lagu dhufto. Ka fikir alaab tayo leh oo waara sida mandiil caadi ah iyo burush xiirista, ama si ka sii fiican, a set xiirka classic taas oo ay ku jiraan labada qalab isla soo bandhigida.
Un Bacda qurxinta Waa hadiyad aad wax ku ool u ah ragga oo dhan, oo waliba ay ka mid yihiin aabbayaasha. Sidoo kale, waxay u badan tahay inaadan mid haysan. Ka fiirso bac nadiif ah oo qaabeysan oo dhowr qaybood ah. Laakiin wax walba ka sarreeya Taasi waxay leedahay meel ku filan oo lagu xareeyo agab nadaafadeed oo dhameystiran markaan safar tago. Bacda musqusha ee wanaagsan waa inay lahaato meel loogu talagalay mandiil, caday lama huraan ah oo leh cadayga u dhigma, gadaal ka dambeeya, cologne, shaambo, uumiyaha, iwm.
Sakiin, gadh xiiraha ama dhalada cologne (hadaad ogtahay astaanta uu adeegsado, ayaa fiican, iyo hadaadan had iyo jeer fursad ka helin midka aad isleedahay wuu jeclaan karaa) sidoo kale fikradaha waaweyn ee ku saabsan daryeelka shakhsi ahaaneed.
Dharka, dhammaystirka iyo kaabayaasha
Tixgeli buluug buluug ah oo buluug ah, qolka dharka lagu xidho, ama qoorta hoosta u dhigaysa haddii aad jeclaan lahayd inaad hadiyad u siiso wax ay xidhan karto. Hadiyadaha caadiga ahi waa sababta oo ah had iyo jeer way shaqeeyaanMarka haddii aad ka mid tahay kuwa si joogto ah u gashanaya suud, xarka ayaa sidoo kale noqon kara shey ku habboon dharka iyo qalabka.
Oo maxaa diidaya inaad ku xirto qalab aad had iyo jeer ku qaadan karto? Si ka duwan hadiyadaha kale, a kaarka birta haysta ama harag waligiis ma waayi doono waxtarkeeda. Intaa waxaa dheer, waxay ku siin doontaa adiga fursadda aad u kala horeysid kaararkaaga (Sanadihii la soo dhaafay waxaa laga yaabaa inaad uruurisay qaar badan oo ay horeyba u qabteen ay tahay inay la wareegaan boos) oo markaa si fudud aad ugu hesho kan aad ugu baahan tahay munaasabad kasta.
Qalabka kale ee la tixgelinayo waa saacadaha iyo Wax alaab ah lama helin., kan dambe oo aad ugu habboon haddii aad tahay qof dan ka leh inuu ku sii jiro qaab muuqaal ahaan wanaagsan; iyo haddii kale, waligeed maahan waqti xun in la bilaabo sameynta. Si kastaba ha noqotee, sida qabow sida ay kuugu muuqan karto adiga, waxaa lagugula talinayaa inaad taxaddar muujiso markay tahay qalabka farsamada. Halista ha u galinin ilaa aad si hubaal ah u ogaato inaad u baahan tahay mid gaar ah oo aad ku fuliso waxqabad.
Buugaag, filimaan iyo muusig
Miyuu jiraa buug had iyo jeer miiskaaga sariirta? Kadib tixgeli buugga cusub ee qoraaga aad jeceshahay ama daabacaad duug ah oo ka mid ah suugaanta caadiga ah taas oo aanu u joojinayn tixraacyada wadahadallada xilliga cuntada qoyska. Sidoo kale waxaa mudan in laga fiirsado hadiyad ahaan Maalinta Aabbaha buug ka hadlaya hiwaayadiisa (baabuurta, sawir qaadista, ranjiyeynta, safarka ...).
Haduu yahay aflaanta filimka, waxaad fursad fiican u leedahay inaad kubbada garaacdo filim DVD ama Blu-ray ah. Ilaa iyo inta ay shineemo fiican tahay, dadka daawada filimada dan kama lihi nooca ama sanadka la sii deynayo, markaa waxaad kubilaabeysaa bilow weyn oo madax ah. Kaliya fiiri maktabadaada fiidiyowga marka hore si aad u hubiso inaadan horey u haysan. Haddii aad muddooyinkan dambe doorbiday taxanaha, tixgeli xirmo uu isagu jecel yahay ama mid uusan weli arkin oo aad u malaynayso inuu jeclaan doono.
Ma weedha ah "ma jiraan wax la barbardhigi karo codka vinylka" ee afkaaga ka soo baxay? Hadday jawaabtu haa tahay, tixgeli qaar vinyl dhagax weyn ka maqan ururintaada Waad ku mahadsan tahay qandhada vinyl-ka ee la soo saaray muddooyinkii ugu dambeeyay, waxyaabo la yaab leh ayaa la sameeyay Aaladda dhagaxa caadiga ah ee 'album Rock' ayaa dib loo soo saaraa kuwaas oo qancinaya dhegta sida isha.
Haddii aad tahay aqoonyahan whiskey ah, waxaad si weyn ugu qanacsan tahay wanaag Scotch inaad ku qori karto meel mudnaan leh golahaaga baar. Isla waxbaa ku dhaca wax kastoo ay yihiinba cabitaanka ruuxa aad jeceshahay (gin, rum, brandy ...), haddii aad wax uun hayso: dhalo ka soo baxa sumcad caan ah ayaa macnaheedu noqon doonaa guul weyn.
Miyaad had iyo jeer la tagtaa koob bun ah oo gacanta ku jira? Xaaladdaas, a qaxwada sameeyaha kafee Waa fikrad hadiyad weyn. Nidaamka saxaafadda Faransiiska wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku laabato habka dhaqameed ee kafeega: buugga gacanta (koronto la'aan ama kaabsal qaali ah). Laakiin waxa ugu muhiimsan ayaa ah haddii aad tahay halbowle kafee ah, waxaad ku raaxeysan doontaa kafeega leh dhadhan iyo udgoon badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Hadiyadaha ugu fiican maalinta aabbaha
Lix aasaas oo awoodi kara guga